Igumbi elinamawele lokuhlambela ekwabelwana ngalo kwihostele efanelekileyo 8 imizuzu yokuhamba ukusuka kwisikhululo saseFukushima
Kuyinto likufutshane ofisi prefectural zezithili ofisi, ngoko ke kucetyiswa ukuba ihlale zoshishino.
Ihostele ezilungisiweyo zesakhiwo esidala. Izindlu zangasese kunye neeshawari kwabelwana ngazo nezinye iindwendwe, kodwa silungiselele amagumbi abanzi ngokufanelekileyo. Ifumaneka kumbindi wedolophu kunye neevenkile zakudala phambi kwesikhululo, yindawo efanelekileyo yokuhlola isixeko. Ikufuphi neofisi ye-prefectural kunye nesithili se-ofisi, ngoko kuyacetyiswa ukuba kuhlale ishishini.
Igumbi elinamawele elineebhedi ezi-2 zomntu omnye.Lixhotyiswe nge-AC kunye neetshaja ze-USB, izixhobo zangaphakathi kwigumbi ezifana nezikrini zokuqengqeleka, izitshixo, izibane, kunye ne-air conditioner zingasetyenzwa nge-tablet erentwayo.Umatshini wokuhlamba ohlawulelwayo kunye nesomisi nazo zibonelelwe, ukwenza oko. elungele ukuhlala ixesha elide.
Indawo yokuphumla yecafe, evuleleke kuluntu ngokubanzi, ibonelela ngokutya kwamazwe ngamazwe.
Ligumbi elinamagumbi amabini anamagumbi amabini angawodwa. Ixhotyiswe nge-AC kunye neetshaja ze-USB, amaziko angaphakathi kwigumbi afana nezikrini zokuqengqeleka, izitshixo, izibane, kunye nezifudumezi-moya zinokusetyenzwa ngethebhulethi eqeshwayo. Umatshini wokuhlamba ohlawulelwayo kunye nesomisi nazo zinikezelwe, okwenza kube lula ukuhlala ixesha elide.